အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု - 2017 ဖက်ရှင်စတိုးအလေ့အကျင့်များစာရင်း
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု – 2017 ဖက်ရှင်စတိုးအလေ့အကျင့်များစာရင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု – 2017 ဖက်ရှင်စတိုးအလေ့အကျင့်များစာရင်း
18/09/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တစ်ဦးက Boutique ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရှေ့နေများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ရေးစပ်တဲ့အထူးပြုဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်, ပညတ်တရား၏အခြို့လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများတဲ့သူများမှာ. သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားသည့်နိုင်ငံတကာကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီကြီးများများထက်များသောအားဖြင့်ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒီအစဉ်အမြဲအမှုမဖြစ်ပေမယ့်.
နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဖက်ရှင်ဆိုင်များခုံသမာဓိကနေတဆင့်ဖြေရှင်းခံရနိုင်စွမ်းအငြင်းပွားမှုများအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစူးစိုက်လေ့, ထို့အပြင်ဥပဒ၏အခြားလယ်ကွက်လေ့ကျင့်နေချိန်တွင်အချို့သောအလေ့အထများ Boutique ခုံသမာဓိအလေ့အကျင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်ပေမယ့်.
ခုံသမာဓိ Boutique အလေ့အကျင့်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုလတ်တလောတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လည်ပတ်, သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ခုံသမာဓိ၏လူကြိုက်များထိုင်ခုံသောမြို့ကြီးများတွင်အခြေစိုက်ကြသည်. အများစုမှာ Boutique အလေ့အကျင့်မဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက် client များအတွက်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုသည်, သို့သော်, ဒါကြောင့်ဂျီနီဗာသို့မဟုတ်ပဲရစ်ကုမ္ပဏီများမကြာခဏလန်ဒန်သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံနှင့်အတူခုံသမာဓိများအတွက်ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်, နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလည်းမှန်.
တချို့ကခုံသမာဓိဖက်ရှင်ဆိုင်များဖွင့်စျေးကွက်အပေါ်ပေါ်ထွက်လာကြသည်, အခြားသူတွေပြီးသားကောင်းမွန်စွာထူထောင်နေစဉ်. အောက်တွင်၏အဖြစ်ကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိ၏လယ်ပြင်တွင်အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ Boutique အလေ့အကျင့်များစာရင်းကိုဖြစ်ပါသည် 2017.
Aceris ဥပဒေ LLC (ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်)
Andreas Reiner & မိတ်ဖက် (ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား)
Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်း Luff (ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ / ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန် / ဝါရှင်တန်ဒီစီ, ယူအက်စ်အေ / Warsaw ကို, ပိုလန် / စင်္ကာပူနှင့်ကမ်ပါလာ, ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ)
ArbLit (မီလန်, အီတလီ)
Aria SLP (မက်ဒရစ်, စပိန်)
ကျွန်းစုံ (ပဲရစ်, ပြင်သစ် / ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်)
Armesto & ဆက်စပ် (မက်ဒရစ်, စပိန်)
Belot Malan နှင့် Associates မှ (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
Billiet & Co. , ရှေ့နေများ (ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ)
Birch Reynardson & Co. , (Oxfordshire, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
BeecheyArbitration (ဟောင်ကောင်, တရုတ်နိုင်ငံ)
Betto Seraglini (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
Cabrera Cammarota PLLC (နယူးယောက်, ယူအက်စ်အေ)
Chaffetz Lindsey (နယူးယောက်, ယူအက်စ်အေ)
Chang ကဥပဒေ (Los Angeles မြို့, ယူအက်စ်အေ)
ကှတျချ, Young က & Keidan (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
နှင့် Tan ဥပဒေ (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
ဒါဝိဒ်သည်ရွှေ & Associates မှ (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
Derains & Grvi (ပဲရစ်, ပြင်သစ် / ဝါရှင်တန် D.C. ယူအက်စ်အေ / ဘေရွတ်, လေဗနုန်တော)
Enyo ဥပဒေ (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
ဂါဗြေလအနုညာတစီရင် (ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန်)
Hanotiau & den Berg က (ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ)
Hubb ဥပဒေရေးရာ (Newburyport (MA), ယူအက်စ်အေ)
Humphry Kerstetter LLP (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
ရှေ့နေများ Almoguera (မက်ဒရစ်, စပိန်)
Jasmine Schmeidler အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက် & စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
Kirby (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
Lazareff သည် Le ဘား (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
Levy, Kaufmann & Kohler (ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်)
Petsche Pollak (ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား)
Quinn Emanuel စမ်းသပ်ရှေ့နေများ - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan က, LLP (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
လက်မှတတရား (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
SDG အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေခိုင်မြဲသော (မီလန်, အီတလီနိုင်ငံ / Bozen, အီတလီနိုင်ငံ / Warsaw ကို, ပိုလန် /, La Romana, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ)
Teynier ဓာတ်ပုံ (ပဲရစ်, ပြင်သစ်)
သုံးဦးရစ်သရဖူ LLP (လန်ဒန်, ဗြိတိန် / ပဲရစ်, ပြင်သစ် / ဝါရှင်တန် D.C. ယူအက်စ်အေ)
Volterra Fietta (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
Wagner အနုညာတစီရင် (ဘာလင်, ဂျာမနီ)
Zaiwalla & Co. , ရှေ့ရပျ (လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)